Aluminium Melting lembuthuma, Arc lembuthuma, okuzenzakalelayo UKWAKHA - Rongtai
Nomkhiqizi professional Heating Izinsiza kusebenza Imikhiqizo cishe engu-22 edlule. Kwemboni yethu itholakala WeifangCity, Shandong. Funda kabanzi
Factory yethu ikhule ibe Premier ISO9001: 2008 nomkhiqizi High, imikhiqizo Indleko Ngempumelelo abaqinisekisiwe. Funda kabanzi
Njalo ubeka izinga endaweni yokuqala futhi ngokuqinile ukuqondisa imisebenzi izinga umkhiqizo zonke inqubo. Funda kabanzi
Sekuyiminyaka engaphezu kuka-22 eminyakeni, Rongtai iye ukugxila ukuhlinzeka ozinzile futhi esebenza kahle MF lokungeniswa Ukushisa imishini.
Shandong Rongtai Induction Technology Co., Ltd. yasungulwa ngo-1997, kuyinto kazwelonke zobuchwepheshe ibhizinisi subordinating emhlabeni-class ephezulu imishini manufacturer- Himile Group.
Lokungeniswa Ukuqeda lembuthuma Aluminium Shell Melt ...
Kusukela yasungulwa, Rongtai uye babenamathela endleleni innovation ezimele kanye R & D. It has a iqembu top-notch amathalenta lobuchwepheshe kule mboni, futhi isungule laboratory yesifundazwe-level, ibhizinisi ubuchwepheshe isikhungo yesifundazwe-level, ucwaningo kamasipala-level ubunjiniyela nokuthuthukiswa isikhungo. Ukumela level ethuthukisiwe of MF lokungeniswa ubuchwepheshe ekhaya aphesheya, ezibamba iqhaza kuhlelo ebukezwe ejwayelekile kazwelonke we "National Industrial Electric Heating Izinsiza kusebenza Standardization Technology", "okulingene Frequency Coreless Induction Esithandweni Somlilo" futhi "Voltage Uhlobo Frequency Ukuguqulwa Multiple okulingene Frequency Coreless Induction esithandweni Qedela Setha "ukusungulwa kwamazinga amandla ukusetshenziswa ukusakaza amaziko kagesi.
Njengoba inkampani ayisihluthulelo Himile Group, Rongtai Induction Technology kubhaliswe inhlokodolobha RMB 10 million. I namafemu amabili ezimboze indawo ingqikithi 137.200 ㎡. Kukhona 5 workshop esine endaweni ingqikithi 46.000 metres square, ihhovisi ephelele futhi izindawo asekelayo. umkhiqizo main yenkampani kuhlanganise naphakathi imvamisa lokungeniswa imishini nasekusekeleni imishini ezishintshayo, imikhiqizo angumongo ephezulu lokungeniswa ukuncibilika somlilo, othomathikhi lokungeniswa Ukushisa somlilo, eqeda inthanethi futhi tempering ukukhiqizwa umugqa, njll, ukukhonza eziningi ephezulu imishini yokukhiqiza amabhizinisi ekhaya nakwamanye amazwe.
Field lomsebenzi isipiliyoni kanye namakhono kuyahambisana-in-hand
Ngo 2003-04, inkampani uthole i Export oda kubalulekile ukuthengisela, ukufaka, ethuma ukusebenza & nokugcinwa Drum Mix Asphalt isitshalo ngesikhathi Dushanbe, Republic of Tajikistan I-ku Airport phrojekthi.
A Ukwenza yimpumelelo futhi ukuphothulwa kwalesi oda kwangeniswa igagasi elisha intuthuko kule nkampani.
Ngezinye inkampani samanje ejabulela ithandwa enkulu e Nigeria, Tajikistan, Kazakhstan, Papua New Guinea, Seychelles & Malawi ngenxa okusezingeni eliphezulu umkhiqizo ephumelelayo futhi emva yokuthengisa support.
Abazinikezele ukuba ekuhlinzekeni eliphezulu kakhulu futhi engabizi international imishini izinga MF emakethe Chinese, futhi ezimele imishini lokungeniswa China sika emhlabeni, abe-ikilasi somhlaba MF imishini umkhiqizi.
Himile Group yasungulwa ngo-1995, itholakala Gaomi City, Shandong Blue Economic Zone. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-20, inkampani uye wazakhela ngokushesha futhi kancane kancane ngesikhathi kwakwakhe yonyaka ukukhula ngesilinganiso cishe 50%. Manje-ke has ezingaphezu kwezingu-30 ezingaphansi, kuhlanganise eyodwa A yokwabelana inkhamphani leseluhleni (ikhodi isitokwe 002595), kazwelonke zobuchwepheshe amabhizinisi amane kanye nezinkampani ezinhlanu kwezilwandle. Himile ihlanganisa indawo ka 2.664.000 ㎡, enezisebenzi ezingaphezu kuka-10,000 futhi unezinto ingqikithi RMB 7.6 bhiliyoni. Kuyinto ahileleke imishini yokukhiqiza, zobunjiniyela sogu lolwandle, wesitimela zokuthutha, igesi, imfundo kanye nakweminye imikhakha.
Mini Melting Furnace, Induction Metal Melting Oven, Melting Furnace Copper, Graphitization Furnace, Aluminum Shell Medium Frequency Furnace, Heat Ukwelashwa Induction lembuthuma,